Vivo – Angel Mobile
ViVOရဲ့ ထွက်ရှိသမျှ Series ထဲမှာ သင်ဘယ် Series📲ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ? ✓ဒီဇိုင်းလှပ ✓အကြမ်းခံ ✓ဈေးနှုန်းတန်တဲ့ ViVO YSeries တွေကို အတန်းဆုံးဈေးနဲ့ အခုပဲ ၀ယ်ယူလိုက်တော့နော်💁 👉Y91C~ 169800 ကျပ် 👉Y11~189800ကျပ် 👉Y90~149800ကျပ် #‌ဗလာမပါကံစမ်းမဲအပြင် ++SmartCardPointsများ ရယူနိုင်ပါပြီ✔️ 🏪🚦 ANGEL Mobile အမှတ်(4)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ရွှေမြင်း၀န်ဘုရားမီးပွိုင့်အနီး၊ မြ၀တီမြို့။ Phone no.:☎️09790149522, 09766616617 Thailand phone:📞0824035883 Gmail📩angelmobile.mwd007@gmail.com Website📡angelmobilemyawaddy.com FbPage:🖥️https://www.facebook.com/ANGELMobileMWD
ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဆံ့ပါတယ်၊ ဘယ်လောက်များများ ဆံ့ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့ရင်လည်း မွှတ်နေတာပါပဲ။ အဲ့ဒါ S1 Pro လေ။ အတန်ဆုံးဈေး ၄၂၉၈၀၀ ကျပ်နဲ့ ဂိမ်းတွေစိတ်ကြိုက်ဆော့ဖို့ ခုပဲ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
#UpgradeYourGaming #UpgradeYourStyle #VivoS1Pro #YourStyleYourOwn #BeFashioned
ဓာတ်ပုံတွေဟာ အကောင်းဆုံးအမှတ်တရတွေပါ။ ဒါဆို ကင်မရာကောင်းတဲ့ ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ အမြဲတမ်း မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တာပေါ့။ Y19 ရဲ့ AI ကင်မရာသုံးလုံးကတော့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမှာ စိတ်ချရလို့ အမှတ်တရတိုင်းဟာ အလှဆုံး ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ Y19 ကို ၃၂၉၈၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီနော်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ https://bit.ly/38xSS6z ဒီလင့်ခ်ကနေ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
#AITripleCameras #VivoY19 #BiggerBattery #BetterExperience
ဘာပဲကြည့်ကြည့် အပြည့်မှ ကြိုက်တဲ့ အမျိုးတို့အတွက် Halo FullView Display နဲ့ Y19 လာပါပြီ💁။ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြည့်လည်း အပြည့်၊ ဂိမ်းဆော့လည်း အပြည့်နဲ့ အင်တာနက်သုံးလည်း အပြည့်ပါပဲ။ Y19 နဲ့အတူ ရသတိုင်းကို အပြည့်အဝခံစားလိုက်ပါ။
#HaloFullViewDisplay #VivoY19 #BiggerBattery #BetterDisplay